पानीको कुनै रंग हुदैन – Dhruva’s Creative world
By Dhruva's Creations on February 20, 2019
समुन्द्र देखि धेरै टाडाबाट आएकोले होला अमेरिका आएदेखिनै समुद्रको छालले जीवनलाई लोभ्याउने गरेको छ। उसले समुन्द्रको रंग निलो हुन्छ भनेको सुनेक थिए तर यहाँ आएर हेर्दा कहिले निलो कहिले कालो देखि लालिमा युक्त रातो र पएलो सम्म देख्दा उ छक्क परेर हेर्थ्यो। कस्तो अचम्म हो यो प्रकृतिको लिला ? एकै ठाउँबाट एकै ठाउमा विभिन्न समय र कालमा हेर्दा किन एस्तो देखिन्छ ? धेरै दिनको गहिरो सोचपछी एक दिन उसले एउटा निस्कर्ष निकाल्यो कि समुन्द्र भनेको त पानी न हो जसको कुनै रङ हुदैन। उसले बल्ल बुझ्यो पानी आकासको रंगबाट प्रभावित हुन सक्छ। पानी समय, मौसम र वातावरणबाट परिबर्तन हुन् सक्छ , समय र परिस्थिति संगै यसको रंगपनि बदलिदो रहेछ। किनकी पानीको कुनै रंग हुदैन।